China graphite isichuse ifektri kanye nabaphakeli | Hexi
I-graphite tile yakhelwe futhi yaguqulwa yi-Hexi Company ngamaphutha ezindleko eziphakeme nempilo yesevisi emfushane yamakhanda kagesi ekhanda lethusi esithandweni sikagesi. I-graphite tile conductive isetshenziswa esikhundleni sethusi lekhanda lethusi futhi isetshenziswa esithandweni sikagesi esingu-6.3 MVA. Ngenxa yalokhu, impilo yenkonzo yayo yinde, inani lezindawo zokuma ezishisayo zesithando somlilo lincishiswe kakhulu, futhi izindleko zokukhiqiza zincishiswe kakhulu.
I-graphite tile iqanjwe ngokuma kwayo, okufana nethayela elisetshenziswe esakhiweni sethu. Leli igama lesintu. I-graphite tile ingeyokwahlukaniswa kwe-graphite block. I-graphite tile ingahlukaniswa ngamamaki amaningana ngokuya ngezidingo ezihlukile zokumelana nokusebenza kokusebenza. Ngoba inqubo yokukhiqiza yemikhiqizo ye-graphite iyefana, izinkomba zomzimba nezamakhemikhali zethayela le-graphite zingabhekisa kwizikhombo zomzimba nezamakhemikhali ze-graphite electrode esetshenziswa ekuncibilikiseni kwensimbi.
Ngitshala ukukhiqizwa kwesikhathi eside nokucutshungulwa kwamathayili we-graphite neminye imikhiqizo ye-graphite. Umkhiqizo unezici zokuqukethwe kwekhabhoni ephezulu, isulfure ephansi nomlotha ophansi, ukumelana okuphansi, ukuminyana okuphezulu nokumelana ne-oxidation. Futhi ingasetshenziswa kabanzi ezindaweni ezahlukahlukene ezinokushisa okuphezulu. Kungakhethwa izinto ezahlukahlukene, kufaka phakathi idiphu kanye nokubhaka okubili, ukudipha okumbili nokudipha okuthathu kanye nokubhaka okune. Ubuningi bezinkuni: 1.58-1.65-1.70-1.75-1.85.
I-Hexi Carbon Co., Ltd. ingaveza amathayili we-graphite wezincazelo ezihlukile ngokuya ngezidingo nemidwebo yamakhasimende. Siyakwamukela ukuthenga!